Nin Gurigiisa Oo Labo Dabaq Ah Doonaya In Loogu Badalo Telefoon iPhone 6 Plus Ah | Hawraar
October 9, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Nin Gurigiisa Oo Labo Dabaq Ah Doonaya In Loogu Badalo Telefoon iPhone 6 Plus Ah
Nin u dhashay dalka Maraykanka ayaa badka soo dhigay guri uu leeyahay oo ka kooban labo dabaq, kaas oo uu ku doonayo, in loogu badalo telefoonka iPhone 6 Plus, oo ah moodeelkii ugu danbeeyay ee shirkada Apple dhawaan soo saartay.
Ninkan ayaa si rasmi ah warbaahinta ugu baahiyay codsigiisa uu ku doonayo in telefoonka gacanta ee “iPhone 6 Plus” loogu badalo gurigiisa labada dabaq ka kooban, taasina ay ka tahay go’aan kama danbays ah, waxaanu sidaa ku daabacay mid ka mid ah, wakaalada warbaahinta ee qaabilsan iibka iyo kirayntay guryaha ee dalka Maraykanka.
Guriga uu ninkani diyaarka u yahay, in loogu badalo telefoon mobile ah ee iPhone 6-ka, ayaa ka kooban, sadex makhsin oo hurdo ah, dhawr qol oo iyaguna fadhi iyo cunto ah, labo madbakh, dhawr musqulood iyo xamaan iyo qayb lagu nasto, waxaanu ninkani iibka gurigaas hore u baahiyay dhawr bilood ka hor.
In kasta oo aanay jirin cid soo codsatay iibka gurigaas, sababta keentay in la iibsan waayana loo tirinayo, magaalada uu ku yaalo gurigan, oo sida warbaahintu sheegtay dhaqaalo xumada Maraykanka ku masalaftay.
Bil ka hor ayuu ninkani qiimaha guriga uu ku iibinayo ka dhigay shan kun oo kaliya, laakiin haddana muu helin cid ka iibsata, waxaanay taasi qayb ka tahay, dhibaatada dhaqaale xumo ee ka taagan, Magaalada Detroit.
Hasa yeeshee ugu danbayntii ayuu go’aan kama danbays ah ku qaatay, in qofkii danaynaya gurigaasi uu ugu badalo, hal telefoon oo iPhone 6 Plus ah, kaas oo qiimo ahaan sadex kun oo dollar kaliya ka taagan dalka Maraykanka.
Ninkan sheegay inuu gurigiisa ku badalanayo telefoonka iPhone 6 Plus, waxa kale oo uu xusay inuu xitaa diyaar u yahay, in lagaga badasho iPad, kaas oo kaliya shardi uu ka dhigay in xadiga xajmigiisu noqdo, 32 GB.
Sida wakaaladaha wararka dunidu ku warameen, waxa uu ninkani gurigan iibsaday lix sanadood ka hor, waxaanu wakhtigaas siistay, lacag dhan afartan kun iyo dhawr boqol oo dollar, waxaanu ku talo jiray inuu kireeyo si uu lacagtiisa dib uga helo.